2021 Ultimate Beginners Umhlahlandlela Wokunweba Izinwele Wokuthola Iz – SL Raw Virgin Hair LLC.
2021 Ultimate Beginners Umhlahlandlela Wokunweba Izinwele Wokuthola Izandiso Ezilungile Zezinwele
Lona umhlahlandlela wokwandisa izinwele ukuze uthole izandiso ezifanele zezinwele. Okuthunyelwe okunobungane kwabaqalayo, kuhle kakhulu uma umusha ekwandisweni kwezinwele kanye nokuvuselela okuhle kulabo abafunde ubuciko bokufaka izandiso zezinwele.
Jun 28, 2021 | LeAna Mcknight
Lo mhlahlandlela wabaqalayo ekufuneni izandiso zezinwele ezifanele zika-2021 uzokuqondisa kwezinye zezinto ongayenza nokungafanele uzenze ekuthengeni izandiso zezinwele ku-inthanethi.
Ziyini izandiso zezinwele?
Izandiso zezinwele ziyinqwaba yezinwele eziklanyelwe ukwengeza ivolumu nobude ezinweleni zemvelo zomuntu. Kungashintsha ukubukeka kwezinwele zakho. Uhlobo olungcono kakhulu lwempahla yokunwetshwa kwezinwele ngokuvamile izinwele zomuntu ngenxa yokuphila isikhathi eside, ukuguquguquka kokunakekelwa, nezinketho zesitayela.
Iziphi izinhlobo zezandiso zezinwele ezikhona?
Kunezinhlobo ezimbalwa ezahlukene zezandiso ezitholakalayo. Okukhethayo kuya ngesitayela oya kuso kanye nezinwele zakho. Ezinye zezinhlobo ezidumile zezandiso zezinwele zifaka:
Ukuhlanganisa kanye nezandiso eziboshwe ngaphambilini ezinama-i-tips
Izandiso zezinwele ze-Microlink
Kungani isitayela sokunwetshwa kwezinwele sibalulekile
Njengengxenye yalo Mhlahlandlela Wokunweba Izinwele Wabasaqalayo, udinga ukucabangela ukwenza isitayela.
Uma ukhetha izandiso zezinwele ezifanele, cabanga ngesitayela ozama ukusifinyelela. Kukhona izitayela zezinwele ‘ezingunaphakade’ ezingeke zidinge zisuswe ebusuku (isb., ama-micro-link, ama-glue-ins, izandiso ezifakwe ngaphambili). Ezinye zingezesikhashana futhi zizodinga ukususwa futhi zifakwe kabusha nsuku zonke, njengezandiso zakho zokunamathisela phakathi namanye amawigi.
Izandiso zezinwele nazo ziza ngobude obuhlukene. Ngakho-ke, ungathola eyodwa kusuka noma yikuphi ukusuka ku-bob kuya kubude behlombe yonke indlela eya ku-tailbone yakho. Futhi, kusekelwe kokuncamelayo kanye nohlobo lwesitayela ongathanda ukusigqoka.
Ukuqonda ukunwetshwa kwezinwele
Okulandelayo, udinga ukuqonda futhi ukhethe ukuthungwa kahle kwezinwele okusekelwe kumsuka wezinwele zekhwalithi ephezulu zivame ukuvela njengezandiso zezinwele zase-Indian, Malaysian, Brazilian, noma Russian.
Futhi uzodinga ukucabangela ukuthi ingabe ufuna isandiso siqonde, i-kinky, i-curly, noma i-wavy? Ungathanda uhlobo olumahhadla lwezinwele zemvelo ukuze zilingane nezakho izinwele?
Ifaka izandiso zakho zezinwele
Ngokuya ngesandiso sezinwele ozikhethayo, kunezinto ezithile okufanele uzenze uma ufaka.
Isibonelo, uma usebenzisa i-weft, cela umlungisi wezinwele wakho ukuthi angasindi ithrekhi (weft) noma abone ukuthi angakwazi yini ukusika i-weft kancane ngangokunokwenzeka. Lokhu kuzovimbela ukuchithwa lapho ufaka futhi kukuvumela ukuthi ugcine izinwele zakho ukuze zisetshenziswe okunye uma ufisa. Lokhu kuzokusiza ukuthi uthole ubude besikhathi sokuthenga izinwele zakho.
Ukugcina izandiso zakho zezinwele
Ukuze ugweme elinye lamaphutha abagqoki abasha abavame ukuwenza, udinga ukufunda ukuthi kufanele ugcine isikhathi esingakanani kuzandiso zakho.Impendulo yalo mbuzo ukuthi akufanele ugcine izandiso zakho isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezingu-15 kuya kwezingu-2 - kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isitayela - ukuze ugweme ukuphuka nokwakheka kokungcola.
Bese, ngenkathi ungaphakathi, izandiso kufanele zinakekelwe njengezinwele zakho zangempela. Kungakho kubalulekile ukuthola izandiso zezinwele zomuntu njengoba ukwazi ukuzinakekela kahle (i-shampoo, isimo, nesitayela) ngenkathi zifakiwe.
Ukugcina isandiso sezinwele
Uma sezisetshenzisiwe, udinga ukugcina kahle izandiso zezinwele ukuze ziphinde zisetshenziswe Kungcono ukugeza nokususa izinwele nge-shampoo futhi uzifake ngamanzi apholile. Uma izinwele sezihlanjululwe kahle, kufanele uzilengise ukuze zome nge-hanger. Uma seyome ngokuphelele, ungakwazi ukuyigcina esikhwameni sokukhiya u-zip ngesikhathi esilandelayo lapho ulungele ukuphinda uyisebenzise.
Izandiso zezinwele ziyinketho yomuntu siqu. Ngakho-ke, cabanga ngalokho ongathanda, sebenzisa lo mhlahlandlela, bese usuka lapho. Futhi uma usulungele ukuthenga izandiso zezinwele zomuntu zekhwalithi ephezulu, bese uhlola iqoqo le-SL Raw Virgin Hair.
2021 hair extensionsBeauty bloggerbeauty trendsbeginners guidedo's and dont'sfirst time weavehair carehair educationhair extensionsHair factshair guidehair style guideHair talkinstylereal virgin hairSL Raw Virgin Hairthings to knowweave lovers